Home » fanorenana » IGLTA sy LGBTMPA manampy fitoviana amin'ny World Tour Network (WTN)
Ny World Tourism Network (WTN) dia tambajotram-pifandraisana ho an'ny mpikambana rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny WTN izao dia miara-miasa amin'ny LGBTMPA sy IGLTA hitarika ny vondrona fitoviana tombontsoa mitovy amin'ny tambajotra.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany ifandraisana andraikitra manerantany ho an'ny mpandray anjara 1500 eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany eran-tany amin'ny firenena 127, ary mpanara-maso maro hafa.
Vondron'olona liana no ivon'ny WTN hanatona ny sehatra rehetra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny fanampiana ny vondrona liana LGBTQ dia dingana iray lehibe amin'ny fitoviana.
IGLTA sy LGBTMPA no fikambanana roa manerantany hiantohana ny fitoviana sy ny fahafaha-manao ho an'ny Bi, Lesbiana, Gay, mpivahiny Transgender ary matihanina amin'ny indostria.
IGLTA dia natsangana tamin'ny 1983 ary tambajotram-pifandraisana lehibe an'ny LGBTQ + manerantany mandray ny fizahan-tany. IGLTA dia manome loharanom-pahalalana sy torohay maimaimpoana maimaimpoana raha miasa hatrany izy io hampiroborobo ny fitoviana sy ny fiarovana ao anatin'ny fizahan-tany LGBTQ + manerantany. Ny mpikambana ao amin'ny IGLTA dia misy ny trano fandraisam-bahiny LGBTQ +, fitaterana, toerana itodiana, mpamatsy serivisy, mpiasan'ny fizahan-tany, mpandraharaha fizahan-tany, hetsika ary haino aman-jery fitsangantsanganana any amin'ny firenena 80 mahery.
Ny Fikambanan'ny Professionals Professional LGBT (LGBTMPA), no fikambanana voalohany sy tokana nanolo-tena hampifandray, handroso ary hanome hery ny matihanina amin'ny fivoriana LGBT +. Na dia fantatry ny vondrom-piarahamonina LGBT amin'ny kolontsaina mahafaoka sy maro samihafa aza izy, ny LGBT MPA dia manome ny fotoana hampiakarana ny feonay miavaka, misolo tena sy manabe ny indostria amin'ny lohahevitra marobe momba ny fampidirana sy ny fahasamihafana. Ny angon-drakitra notarihinay tamin'ny fikarohana dia manome fahatakarana manan-danja kokoa amin'ny vondrom-piarahamoninay sady mizara fomba fanao tsara indrindra amin'ny fitarihana orinasa.
Amin'ny maha-fikambanana miorina amin'ny fiarahamonina, misy mpikambana iraisam-pirenena, ny LGBTMPA dia manome fampahafantarana manerana ireo sehatra fivoriana efa napetraka. Amin'ny maha-fikambanana mitambatra azy, ny IGLTAMPA dia manome fotoana ahafahan'ny matihanina mivory rehetra tafiditra ao anatin'ny tanjona lehibe hampidirina ao anatin'ny orinasa.
Samy IGLTA sy LGBTMPA no mitarika ny vao niforona Vondrona mahaliana LGBTQ an'ny World Tourism Network. Izay rehetra miditra amin'ny vondrona liana dia ampirisihina koa hiditra ao amin'ny IGLTA sy / na LGBTMPA amin'ny maha mpikambana azy.
“Faly izahay mandray ny IGLTA sy ny LGBTMPA ho mpikambana farany anay, ary manantena ny hiara-hiasa amin'ireo fikambanana roa tonta amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahantany. Ity dia dingana iray lehibe ho an'ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahan-tany maneran-tany amin'ny adidiny mba ho tambajotram-pifandraisana ho an'ny sehatra rehetra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany ", hoy ny filohan'ny WTN, Juergen Steinmetz.
World Tourism Network (WTN) no feo efa ela nielezan'ny orinasam-pizahantany kely sy salantsalany manerantany. Amin'ny fampitambarana ny ezakay dia avo lenta ny filàna sy ny hetahetan'ny orinasa kely sy salantsalany ary ireo mpandray anjara aminy.
Ny Network Network an'ny fizahantany dia nipoitra avy tao fananganana.travel fifanakalozan-kevitra. Ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanarenana.travel dia nanomboka tamin'ny 5 martsa 2020 teo amin'ny sisin'ny ITB Berlin. Nofoanana ny ITB, saingy natomboka indray ny fanamboarana.travel tao amin'ny Grand Hyatt Hotel any Berlin. Tamin'ny volana desambra fanarenana. Nitohy ny dia fa voarafitra tao anatin'ny fikambanana vaovao antsoina hoe World Tourism Network (WTN).
Amin'ny fampiarahana ireo mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra rezionaly sy manerantany, ny WTN dia tsy vitan'ny mpisolovava ho an'ny mpikambana ao aminy fa manome feo azy ireo amin'ny fivorian'ny fizahan-tany lehibe. WTN dia manome fotoana ilaina sy tambajotra ilaina ho an'ny mpikambana ao amin'ny firenena 127.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsidihana IGLTA www.iglta.org
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsidihan'ny LGBTMPA www.lgbtmpa.com
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny World Tour Network fitsidihana www.tv.travel